Bari iyo Sool oo galabta yeelan doona ciyaartii ugu danbaysay ee hanashada koobka & Mudug oo ciriirsatay kaalinta 3-aad. – Radio Daljir
Garoowe, Dec 22- Waxaa galabta garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe ka dhaci doonta ciyaarta kama danbaysta ah ee koobka ciyaaraha gobollada Puntland, taasi oo ay isku haleeli doonaan xulalka gobollada Bari iyo Sool.
Ciyaartaan oo ah midda lagu hanan-doono koobka ciyaaraha gobollada Puntland oo muddo bil ku dhaw ka soconayey garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland, ayna ku hardameen 8-da gobolka ee uu ka kooban yahay maamulka Puntland, ayaa galabta huwan xiiso iyo xamaasad gaar ah oo ka duwan ciyaarihii horay uga dhici jiray garoonka, maadaama galabta garoonka la keeni doono koobkii gobolladu hanashadiisa ay muddo u halgamayeen.
Mas?uuliyiinta maamulka ciyaaraha gobollada Puntland ayaa sheegay in wax badan laga badelay xaaladda garoonka ciyaaraha ee Mire Awaare, iyadoo loo sii gogol xaarayo ciyaarta kama danbaysta ah ee galabt, waxaana si weyn loo adkayn amniga garoonka, sidoo kale waxaa wax laga badelay wakhtigii ciyaaruhu ay bilaaban jireen iyadoo loo cayimay xilli hore oo galabta ah in ay bilaamaan si fursad lagu ciyaaro loo helo haddii ciyaaruhu barbar dhac ay galaan.
Dhanka kale shalay galab isla garoonka Mire Awaare waxaa ka dhacday ciyaar aad u xiiso badan taasi oo dhaxmartay gobollada Mudug iyo Sanaag, taasi oo loogu tartamayey kaalinta 3-aad ee ciyaaraha Puntland.
Ciyaartaan oo ahayd mid aad u kulul labada kooxoodna ay soo bandhigeen awooddooda ciyaareed ayaa ugu danbayntii guushu ku raacday xulka gobolka Mudug oo ciriirsaday kaalintaasi saddexaad kadib markii ay rigoorayaal kaga badiyeen xulka gobolka Sanaag.
Labada kooxood ee Mudug iyo Sanaag oo u jaxartamayey galitaanka kaalintaas 3-aad ayaa la soo baxay xirfado ciyaareed oo aan horay looga baran markii ay socdeen ciyaaruhu, wareegii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 waxaana labaadi gool lahaa xulka gobolka Sanaag.
Markii la iskugu soo laabtay wareeggii 2-aad ayey sidii oo kale ku bilaabatay weerar iyo weerar celin, waxaana xulka gobolka Mudug u suurto gashay in ay bareejeeyeen xulka gobolka Sanaag kadib markii shabaqooda ay ku habsadeen banooni laga soo laaday bartamaha garoonka.
Waxaana 90-kii daqiiqo ee loo talo galay in ay ciyaartu socoto ay ku dhammaysteen barbar dhac 2-2, waxaan guddiga ciyaaruhu ay go?aamiyeen in la dhigi min 5 rigoore taasi oo isna barbar dhac noqotay kadib markii ay min 4 rigoore dhashadeen halka ay hal hal rigoorana iska beerdareeyeen.
Guddiga ciyaarta ayaa misna go?aamiyey in la dhigo min hal rigoore taasi oo xulka gobolka Mudug u suurto galisay in ay dhashadaan halka xulka gobolka Sanaag-na ay iska beerdareeyeen, waxaana sidaasi kaalinta 3-aad ku hantay xulka gobolka Mudug.